यस्तो छ प्रदेश ५ को बजेट,बजेटको आकार-३६ अर्ब ४१ करोड,मुख्य प्राथमिकता-पुर्बाधार,कृषि र पर्यटन (पढ्नोस पूर्ण पाठ):lumbinireview
बुटवल १ असार । प्रदेश ५ सरकारले कृषि, पर्यटन र पुर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा वैठकमा वजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । गत वर्ष २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको वजेट थियो ।
बजेटमा संसद विकास कोष समावेश गरिएको छैन । तर सांसदहरुसँग माग गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका ६ वटा योजनालाई समावेश गरेर हरेक सांसदले ६० लाख बराबरका योजना पाउने गरी बजेट बनाइएको छ ।
प्रस्तुत छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको पूर्ण पाठ-
Final Budget Speech p5FY 2076-77 (1)
34. कृषि उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको मूल्य श्रृंखलाका प्रत्येक चरणमा कृषकलाई सहयोग गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न, सामुहिक ब्याबसायीकरण गर्न र प्रसार प्रणालीलाई थप सवल तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि चालू आर्थिक बर्षमा प्रारम्भ गरिएको “स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्नेगरी सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि रु. ३५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
198. चालू आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो प्रदेश अग्रणी स्थानमा उभिदै गरेको सुखद सम्भावनाले हामीलाई आगामी वर्ष अझै ज्यादा जिम्मेवारी वोधका साथ काममा जुट्न घच्घच्याइरहेको अनुभूति गरेको छु । यस बजेटले हामीलाई “समृद्ध प्रदेश खुशी जनता” को दीर्घकालीन सोचतर्फ अघि वढ्न मद्दत गर्ने विश्वास लिएको छु ।